Ukuphulaphula amagama asemagunyeni ahlukeneyo e-American singer-songwriter uPatty Smyth - ayenzi zombini kunye ne-'80s ' esitsha esangqambileyo ye-rock band Scandal kunye neengxelo zakhe zengqondo - omnye unokucinga ukuba ibhinqa eli neli talente, elinomdla bekuya kuba 'i-80s megastar. Ngokudabukisayo, uSmyth akazange afikelele kwizinga lokuqatshelwa ngokukodwa kwiitalente zakhe kunye nesibheno. Nangona kunjalo, ukukhangela emva kwento ethobekileyo ye-80s yokurekhoda ibonisa ipesenteji ephezulu yeengoma eziphezulu zegitala ezikhutshwe ngamandla kunye ne-panache. Nanku ukujonga kwexesha elihle kwiingoma ze-80s ezibalaseleyo ezibhekiselele kuSmyth kwizwi lokukhokela, ngokugqithiseleyo zithathwe kwii-albhamu zokukhishwa kwee-albhamu kodwa zenza isampula ekuqalekeni komsebenzi wakhe wekhampasi.
Njengomculo weNgqungquthela weNgqungquthela, kubonakala kumangalisa ukuba le ngqungquthela, intsha engxowankulu-yavutha ingxondorha enye eyayibanjwe kwiNombolo 65 kwi-charts Billboard pops ngo-1982. . Ngaphandle koko, ukubunjwa kwe-Zack Smith kusebenza njengesithuthi esipheleleyo kwisitayela sokusebenza sikaSyyy, esithintekayo. Izenzo ezimbalwa ezisekuqaleni-'80 zezenzo zazibonakalisa zikwazi ukulungelelanisa ngempumelelo umgca phakathi kokutshatyalaliswa kwintshahla kunye nedwala lomhlaba , kodwa ngokuqinisekileyo iScandal iyafaneleka njengenye yeengoma ezilungileyo kakhulu. Le ngqungquthela egciniweyo eneempembelelo kunye nesigqibo, kwaye ngokuqinisekileyo imele ngokuziqhenya njengenye yezona zingqungquthela ze-80s.
"Uthando Luye Lwenzela"
I-Cover Cover I-albhamu ye-CBS
Ukulandelelana kwamaScandal okukodwa kunokucatshulwa njengento yokuqala njengokuba kungengomxholo ophezulu. Kwakhona, ilizwi likaSmyth livuya ngokukhawuleza, ngokungafaniyo kwaye ngokungathandabuzeki likhulu. Abanye abagxeki baye baxotha ingoma kaZack Smith (owayenomsebenzi wokuqamba phantse kuwo onke amacandelo e-band) njengento yokuthengisa kunye / okanye kufumaneka, kodwa abalandeli be-rock-right-ahead should not have any complaints. Lo mzila wokuqala we-1983 unokwenza umdlalo weemidlalo eziqhelekileyo, kodwa uhlala ungakhohlwayo ngenxa yobuchule bentsebenziswano yebhanki kwaye, ngokuqinisekileyo, uSyyth's sexy persona ephantse ukuba ibonakale inomdla onothando kumntu oqhelekileyo. Phawula ukuba ndathi "phantse."
"Olunye Uthando Olubi"
Le ngoma ye-albhamu enzulu-ukusuka kwi-Scandal's self-titled, ingoma yesihlanu 1982 EP - igibela kwi-brooding, i-guitar i-riff enamandla kakhulu eyenza uhlobo oluthile oluvuthayo olutshisayo lwebhanki. Kwakhona, ilizwi likaSmyth liyamangalisa (kwaye libonisa ukuba unamandla okwenza ulwalamano olunzima njengoko wayecelwa ukuba ayenzele uVan Halen emva kowe-1985). Ukongezelela, iitalente zokubhala iingoma ezibizwa ngokuba nguSmith noSmyth zibonisa ubuninzi be-fusion apha. Ekugqibeleni, mhlawumbi into enhle uSyyth wakhetha umgangatho ophakathi phakathi kwetye elinzima kunye nomculo ongasomnye umsebenzi wakhe omkhulu. Kodwa andithandabuzeki ukuba wayenokwakheka iinduna ezininzi kwizinto ezihlukeneyo, kwaye le ngoma isebenza njengobungqina obubalulekileyo bokuxhasa loo mbono.
Kuyinto ephazamisayo ukuba - ngefashoni efana nepesenti enkulu yeempumelelo eziphambili zezenzo zentombi ezifana nePat Benatar kunye neNtliziyo ngexesha lama-80s - ingoma ephethe ingoma engaphandle yimiba ye-Scandal enkulu kwaye i-Top 10 engatshatanga. Nangona kunjalo, ukubunjwa kweHolly Knight / Nick Gilder ubuncinane kuye kwazuza isimo sayo njenge-fs 'eyi-80s yamagqabantshintshi. Kungcono, iStyth yokuzithemba ngokuzithemba kunye nesitayela esikhulayo kuye kumnceda enze ingoma ibe yintsingiselo efana neyokuqala kweScandal. I-irony-free, i-rock-time and roll inexesha elincinci lingaqhelekanga liye lafikelela kwiindawo eziphakamileyo ezifunyenwe ngolu gaba oluqinile, olukhutshwe ngogarha lokuzimela ngokwesini.
Nangona ikhutshwe njengomntu ongatshatanga ekuqaleni kuka-1985, le ngoma yahluleka ukuphawula iBillboard Top 40 kwaye yakha kwimpumelelo ye "Mfazwe." Oku kungenxa yokuba itywala ayinakho umgangatho, kodwa ingathi ingalona xesha elide lokusebenza kwalo, iScandal yayiqhubekile ngokucacileyo kwisandi sayo. USyyth uhlabelela ngeeflethi eziqhelekileyo kunye nokuchithwa kwamatye ahlukahlukeneyo kulo mzila - ebhalwe kwakhona nguZack Smith kunye naye. Nangona kunjalo, olu hlobo lwenqanaba eliphakathi kwegitala eliqhelekileyo liqalise ukuba lisongelwa ukunyuka kweenwele zetsimbi kunye neyokuqala kweerhole lekolishi kunye nolwalwa lwangoku. Izinto ezithembekileyo - mhlawumbi ukuba ziphosakele - kodwa nangona u-Smyth ovulekile, isibheno esasasazeka singabonakala sithula ukufa kweScandal kunye nemigangatho yamatye amaninzi eyenza umculo oqoshiwe.
"Yithetha Oko Uya Kuza"
Ngaphandle kokukhathala, iSyy & Co. ibonisa ngokugqithiseleyo ngolu hlobo lwamandla olumnandi nolunomdla olusuka kuMaqhawe. U-Smyth unxibelelwano olunjengelizwi ngokuqinisekileyo liyaziwayo phakathi kwabalandeli abamthandayo ngobuhle bakhe kunye nomsebenzi wakhe (njengoko uphendlo lwe-intanethi lityhila ngokukhawuleza), kodwa ngelanga isiseko somculo singakhange sihlawuliswe ngokwaneleyo ukubonakaliswa kweetalente zakhe. Sekunjalo, ngaphaya kwesi sizathu, uhlobo oluthile lwe-tune olufana nalolu luhlobo lokuwela phakathi kweentsikelelo ngexesha lezandla zomculo we pop. Akunjalo ukuba u-1985 wayenjalo yonke into enamandla, kodwa isimo esiqinileyo nesihloniphekileyo sale ngoma kungenzeka ukuba sisebenze ngokuchasene nokukwazi ukuva, ukuba oko kuyenza ingqiqo.
I-Album Cover Cover umfanekiso weColombia
Kuba yakhe ingqungquthela ye-solo - ebizwa ngokuba yi- Never Enough- Smyth ayizuzanga kuphela kwiiseshoni zeeseshoni zika-Eric Bazilian kunye noRob Hyman (eyona nto yobuchule be-Philadelphia roots rock band I-Hooters) kodwa kunye neengcamango zabo zangaphambili. Le ngqinileyo, ekhupha i-rocker ekuqaleni yayibhalwa - kwinguqu ehluke kakhulu - yilo bhangqa le-Pre-Hooters band Baby Grand. Ekugqibeleni, uSmyth wanikela umboleko wokubambisana ngokubhaliweyo kule nguqulelo, kodwa nangaphandle kwelo galelo ukhulisa intsimbi yeengoma nje ngezwi lakhe elilodwa kunye novuyo. Enye yeenkosikazi ezinkulu ezingabonakaliyo ze-rock music, uSmyth kufuneka ahlawule kwimbali yomculo njengomnye wabaculi apho umhlaba wawuthanda ukuwuva khona. Kodwa ngoku, ikhathalogi yakhe enokuthobeka kodwa enomdla iya kufuneka iyenze. Musa ukuyihoxisa lo. Kaninzi "
I-Alabama Iingoma zee-80s
Iingoma eziphezulu zeKool kunye neNgqungquthela yee-80s
Kutheni Kuthetha Ukongeza ITyuwa Ukwandisa Indawo Ebilisa Amanzi?
Inkcazo kunye neMimiselo yokutyunjwa kwiGrama
Ellen Ochoa: Inventor, Astronaut, Uvulindlela
Ulwahlulo lwaBantu kunye noHlangano
I-Utopia yabesifazane / iDystopia